Hybrid Smartwatch ကို LG ကထုတ်လုပ်တော့မယ်လို့ သတင်းထွက်နေ
29 Apr 2018 . 3:01 PM
လက်တလော ကောလဟာလတွေအရ LG က Smartwatch အသစ်ကိုထုတ်လုပ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ LG Watch Timepiece လို့ နာမည်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Google ရဲ့ Wear OS ကိုပဲအသုံးပြုထားမှာဖြစ်တယ်လို့ သတင်းထွက်ထားပါတယ်။
LG ကအရင်ကလည်း Smartwatch ကိုထုတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ လက်ရှိပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာတော့ သိပ်ပြီးလူသိမများပေမယ့် အခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ လူငယ်ပရိတ်သတ်ကို ဆိုင်ထားပါတယ်။ LG လက်ရှိရောင်းချနေတဲ့ Smartwatch လေးတွေကတော့ LG Watch Style နဲ့ LG Watch Sport တွေပါ။ နောက်ထပ်ထုတ်မယ့် Smartwatch ကတော့ လက်ရှိ LG Watch တွေလိုမျိုး မဟုတတ်ပဲ နာရီလက်တံအစစ်တွေကိုသုံးပေးထားမှာပါ။
နာရီလက်တံတွေနဲ့ Wear OS တို့ပေါင်းလိုက်တော့ Hybrid Smartwatch စာရင်းဝင်သွားပါတယ်။ Timepiece အတွက် အချိန်တိကျမှုရှိအောင် Quartz Movement ကို သုံးပေးထားပါတယ်။ Stainless Steel Body နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားမှာဖြစ်လို့ Analog နာရီချစ်သူတွေကိုတော့ သေခြာပေါက်ဆွဲဆောင်နိုင်မှာပါ။ IP68 အဆင့်အထိ ရေဒဏ်၊ ဖုန်ဒဏ်ခံနိုင်အောင်လုပ်ပေးထားတာကြောင့် မိုးရွာတာလောက်ကတော့ LG Timepiece ကဂရုစိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
Analog နဲ့. Digital ပေါင်းလိုက်တော့ Smart ဖြစ်သွားတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် LG က Analog နဲ့တင်ရပ်မနေပါဘူး။ နာရီလက်တံတွေရဲ့နောက်မှာ LCD Display ကြီးကို နာရီမျက်နှာပြင်အပြည့်ထည့်ပေးဦးမှာပါ။ နာရီလက်တံတွေက Dispaly ထဲကဖောက်ထွက်နေတာမျိုးပါ။ 360×360 Resolution ရှိတဲ့ LCD Display ကိုတပ်ပေးထားမှာဖြစ်ပြီးတော့ အရွယ်အစားကတော့ 1.2 Inch ရှိမှာပါ။ Dispaly နဲ့ Analog နာရီကို Power ပေးဖို့အတွက် 240 mAh Battery ကိုအသုံးပြုပေးထားပါတယ်။ 4GB Storage ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး Qualcomm ရဲ့ Snapdragon 2100 Chipset ကိုအသုံးပြုမှာပါ။ 802.11n WiFi နဲ့ Blutetooth 4.2 ပါဝင်မှာဖြစ်ပေမယ့် Cellular Data တော့ သုံးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့သိရပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ အချက်အလက်တွေအားလုံးက သေခြာပေါက်ဖြစ်လာမယ်လို့ ပြောလို့မရသေးပါဘူး။ ကောလဟာလနဲ့ သတင်ပေါက်ကြားထားတာတွေက ရလာတဲ့အချက်အလက်တွေဖြစ်တာကြောင့် တစ်ကယ် မိတ်ဆက်တော့မှပဲ အမှန်ဖြစ်မှာပါ။
Hybrid Smartwatch ကို LG ကထုတျလုပျတော့မယျလို့ သတငျးထှကျနေ
လကျတလော ကောလဟာလတှအေရ LG က Smartwatch အသဈကိုထုတျလုပျနတေယျလို့ သိရပါတယျ။ LG Watch Timepiece လို့ နာမညျပေးနိုငျပါတယျ။ Google ရဲ့ Wear OS ကိုပဲအသုံးပွုထားမှာဖွဈတယျလို့ သတငျးထှကျထားပါတယျ။
LG ကအရငျကလညျး Smartwatch ကိုထုတျခဲ့ဖူးပါတယျ။ လကျရှိပွညျတှငျးဈေးကှကျမှာတော့ သိပျပွီးလူသိမမြားပမေယျ့ အခွားနိုငျငံတှမှောတော့ လူငယျပရိတျသတျကို ဆိုငျထားပါတယျ။ LG လကျရှိရောငျးခနြတေဲ့ Smartwatch လေးတှကေတော့ LG Watch Style နဲ့ LG Watch Sport တှပေါ။ နောကျထပျထုတျမယျ့ Smartwatch ကတော့ လကျရှိ LG Watch တှလေိုမြိုး မဟုတတျပဲ နာရီလကျတံအစဈတှကေိုသုံးပေးထားမှာပါ။
နာရီလကျတံတှနေဲ့ Wear OS တို့ပေါငျးလိုကျတော့ Hybrid Smartwatch စာရငျးဝငျသှားပါတယျ။ Timepiece အတှကျ အခြိနျတိကမြှုရှိအောငျ Quartz Movement ကို သုံးပေးထားပါတယျ။ Stainless Steel Body နဲ့ ထုတျလုပျထားမှာဖွဈလို့ Analog နာရီခဈြသူတှကေိုတော့ သခွောပေါကျဆှဲဆောငျနိုငျမှာပါ။ IP68 အဆငျ့အထိ ရဒေဏျ၊ ဖုနျဒဏျခံနိုငျအောငျလုပျပေးထားတာကွောငျ့ မိုးရှာတာလောကျကတော့ LG Timepiece ကဂရုစိုကျမှာမဟုတျပါဘူး။
Analog နဲ့. Digital ပေါငျးလိုကျတော့ Smart ဖွဈသှားတာပေါ့။ ဒါပမေယျ့ LG က Analog နဲ့တငျရပျမနပေါဘူး။ နာရီလကျတံတှရေဲ့နောကျမှာ LCD Display ကွီးကို နာရီမကျြနှာပွငျအပွညျ့ထညျ့ပေးဦးမှာပါ။ နာရီလကျတံတှကေ Dispaly ထဲကဖောကျထှကျနတောမြိုးပါ။ 360×360 Resolution ရှိတဲ့ LCD Display ကိုတပျပေးထားမှာဖွဈပွီးတော့ အရှယျအစားကတော့ 1.2 Inch ရှိမှာပါ။ Dispaly နဲ့ Analog နာရီကို Power ပေးဖို့အတှကျ 240 mAh Battery ကိုအသုံးပွုပေးထားပါတယျ။ 4GB Storage ပါဝငျမှာဖွဈပွီး Qualcomm ရဲ့ Snapdragon 2100 Chipset ကိုအသုံးပွုမှာပါ။ 802.11n WiFi နဲ့ Blutetooth 4.2 ပါဝငျမှာဖွဈပမေယျ့ Cellular Data တော့ သုံးလို့ရမှာမဟုတျပါဘူးလို့သိရပါတယျ။ လကျရှိအခြိနျမှာတော့ အခကျြအလကျတှအေားလုံးက သခွောပေါကျဖွဈလာမယျလို့ ပွောလို့မရသေးပါဘူး။ ကောလဟာလနဲ့ သတငျပေါကျကွားထားတာတှကေ ရလာတဲ့အခကျြအလကျတှဖွေဈတာကွောငျ့ တဈကယျ မိတျဆကျတော့မှပဲ အမှနျဖွဈမှာပါ။